Digital Bullion Gold စျေး - အွန်လိုင်း DBG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Digital Bullion Gold (DBG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Digital Bullion Gold (DBG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Digital Bullion Gold ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Digital Bullion Gold တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Digital Bullion Gold များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Digital Bullion GoldDBG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000274Digital Bullion GoldDBG သို့ ယူရိုEUR€0.000233Digital Bullion GoldDBG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00021Digital Bullion GoldDBG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00025Digital Bullion GoldDBG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00249Digital Bullion GoldDBG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00173Digital Bullion GoldDBG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00608Digital Bullion GoldDBG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00102Digital Bullion GoldDBG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000366Digital Bullion GoldDBG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000383Digital Bullion GoldDBG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00622Digital Bullion GoldDBG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00212Digital Bullion GoldDBG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00146Digital Bullion GoldDBG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0205Digital Bullion GoldDBG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0456Digital Bullion GoldDBG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000376Digital Bullion GoldDBG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000414Digital Bullion GoldDBG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0085Digital Bullion GoldDBG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00191Digital Bullion GoldDBG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.029Digital Bullion GoldDBG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.327Digital Bullion GoldDBG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.104Digital Bullion GoldDBG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0201Digital Bullion GoldDBG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0076
Digital Bullion GoldDBG သို့ BitcoinBTC0.00000002 Digital Bullion GoldDBG သို့ EthereumETH0.0000007 Digital Bullion GoldDBG သို့ LitecoinLTC0.000005 Digital Bullion GoldDBG သို့ DigitalCashDASH0.000003 Digital Bullion GoldDBG သို့ MoneroXMR0.000003 Digital Bullion GoldDBG သို့ NxtNXT0.0227 Digital Bullion GoldDBG သို့ Ethereum ClassicETC0.00004 Digital Bullion GoldDBG သို့ DogecoinDOGE0.0818 Digital Bullion GoldDBG သို့ ZCashZEC0.000003 Digital Bullion GoldDBG သို့ BitsharesBTS0.0106 Digital Bullion GoldDBG သို့ DigiByteDGB0.0106 Digital Bullion GoldDBG သို့ RippleXRP0.000917 Digital Bullion GoldDBG သို့ BitcoinDarkBTCD0.00001 Digital Bullion GoldDBG သို့ PeerCoinPPC0.000987 Digital Bullion GoldDBG သို့ CraigsCoinCRAIG0.129 Digital Bullion GoldDBG သို့ BitstakeXBS0.0121 Digital Bullion GoldDBG သို့ PayCoinXPY0.00495 Digital Bullion GoldDBG သို့ ProsperCoinPRC0.0356 Digital Bullion GoldDBG သို့ YbCoinYBC0.0000002 Digital Bullion GoldDBG သို့ DarkKushDANK0.0909 Digital Bullion GoldDBG သို့ GiveCoinGIVE0.614 Digital Bullion GoldDBG သို့ KoboCoinKOBO0.0646 Digital Bullion GoldDBG သို့ DarkTokenDT0.000252 Digital Bullion GoldDBG သို့ CETUS CoinCETI0.818